4 mu1 Mvura Base
4in1 tangi yemvura
Dhizaini yedu yepakutanga kubva muna 2020, nyika yekutanga Yakaumbwa Mvura Base inogona kugutsa maapplication mana.Senhengo ichangoburwa yemhuri yedu yepasi pemvura, iyo 4in1 chigadziko chemvura chinochengeta dhizaini yedu yemhando yepamusoro (stackable / musanganiswa nemuchinjikwa base), zvakare inogona kuva hwaro hwechiratidzo chekumira.
Seyakajairwa mureza danda base, inogona kushandiswa ine spindle seyamwe mureza base kana seyekuwedzera huremu kumureza X kana simbi base ndiro kuitira kugadzikana zvirinani.
Sechigadziko chechiratidzo chetsoka, 4-5mm ACM blade (aluminium composite panel) saizi A1 (594*841mm) inokurudzirwa.Saina Graphic nzvimbo: W: 594mm x H: 800mm kumativi ese
Sechiratidzo chekuzunguza, yakasimba simbi chubhu furemu ine hupfu yakavharwa, kureba kwechubhu inogadzirwa uye kurongedzerwa pasi pechigadziko chemvura mubhokisi rimwechete kuitira kutakura nyore.Panel size iA1(594*841mm).
Semachira ekumira, jira rinochinjika pillowcase.Saizi yakajairwa yesimbi chubhu furemu yakafanana nechiratidzo chekuzunguza, saizi yekuratidzira i70 * 120cm.Kureba kwesimbi frame kunogona kugadziriswa.
4 akasiyana maapplication mu1 base base yemvura, yakatangwa neWZRODS pasi rese
Zviri nyore kuchinja uye kudzora stock yako, chengetedza mari uye nzvimbo yemasheya.
Metal furemu yakarongedzerwa nechigadziko chemvura mubhokisi rimwechete kuitira kutakura nyore
Mvura base stackable kune huremu hunorema
UV inodzivirira HDPE, yakanakira kushandiswa kwenguva refu kunze
Mavhiri ari pasi anogona kukubatsira kuti ufambe nyore nyore
MaLED uplighters anoshanda kuvhenekera chiratidzo chako murima
Item Code Zita Display Appr.GW
DW-60 Chigadziko chemvura/Chiratidzo chetsoka 59x80cm 2.5kg
DW-61 Swing sign 59x84cm 6.5kg
Dw-62 jira Stand 70x120cm 6.5kg
Zvakapfuura: Tabletop Beachflag
Zvinotevera: Balloon Cluster